Maamulka Magaalada Jowhar oo ku dhawaaqay digniin ku socota Ganacsatada | Dayniile.com
Home Warkii Maamulka Magaalada Jowhar oo ku dhawaaqay digniin ku socota Ganacsatada
Maamulka Magaalada Jowhar oo ku dhawaaqay digniin ku socota Ganacsatada
Mas’uuliyiinta Maamulka Degmada Jowhar ee Caasimadda Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle ayaa sheegay iney talaabo adag ka qaadi doonaan dadka leh maqaayadaha iyo Farmashiyeyaasha ee qashinka ku shuba Goobaha danta guud.
Guddoomiyaha Xaafada Kulmis ayaa sheegay in goob kamid ah meelaha danta Guud ee Xaafadda ay dadka leh Maqaayadaha iyo farmashiyeyaasha si ku tala gal ah qashin ugu soo shubaan, wuxuuna Ganacsatada ugu baaqay inay joojiyaan.
Guddoomiye kuxigeenka amniga Magaalada Jowhar Xasan Barow Bocor ayaa sheegay in xilligaan wixii ka dambeeya qofkii lagu arko, iyada oo qashin ku shubeysa Goobaha Danta guud laga qaadi doono tallaabo sharci ah.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in Maamulka degmada Jowhar uu Bulshada u diyaariyay goobo gaar ah oo qashinka lagu shubo, isla markaana aysan ka aqbaleyn in la sameeyo waxyaabo lidi ku ah bilicda Magaalada Jowhar ee Caasimadda Hir-Shabeelle.
Digniintaan kasoo baxday Maamulka Magaalada Jowhar ayaa ka dambeeysay kadib markii Ganacsatada qaar ay Goob qashinka la dhigo ka sameeyeen halka lagu keydiyo Biyaha Shirkadda Farjano, taas oo Maamulku sheegay inay cuduro ka dhalan karaan.
Previous articleDagaal khasaaro geystay oo ka dhacay degaan ka tirsan Gobolka Mudug
Next articleDowladda Uganda ayaa xir xirtay 48 Ruux oo laga shakisan yahay Qaraxi ka dhacay Dalka Uganda
Carruurta ku nool qaaradda Africa intooda badan oo laga tallaalayaa cudurka...
Carruurta ku nool qaaradda Africa intooda badan ayaa laga tallaalayaa cudurka duumada waqti taariikhi ah oo lagula dagaallamayo cudurka dilaaga ah. Duumadu waxay ka mid...
Yaa ka danbeeyo Qal qalka Ka jira Boosaaso waa kma qof...
Halkaan ka Daawo Sheikh Shaakir oo u hanjabay Ciidamada Dowlada ee...
Wasiirad Khadiija Diiriye oo wajahaysa xaalad adag una dacwootay ugaaska Mudulood
Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti oo naqdiyay hadal kasoo yeeray Jeneraal Mareykan...